सफल कसरी हुने ? १० सुत्र । – Waikhari
गृहपृष्ठ Featured सफल कसरी हुने ? १० सुत्र ।
सफल कसरी हुने ? १० सुत्र ।
हामी अहिले जुन सुकै अबस्थामा भए पनि, जुनसुकै उमेरको र जुन सुकै ठाउँमा रहे पनि यो भन्दा राम्रो, आरामदायी, सुखी, खुसी र सम्मानजनक जीवन जीउन चाहान्छौं । यो मानबिय स्वभाव हो । हामी जीवनको हरेक क्षेत्रमा सफल हुन चाहान्छौं । आफ्नो कार्यक्षेत्रमा सफतलाको शिखर चुम्न चाहान्छौं । मानिसमा यस्तो चाहाना हुनु पनि पर्छ । यहि मानबिय गुण कै कारण हामी पृथ्वीमा सर्वश्रेष्ठ प्राणीको रुपमा चिनिन्छौं । तर हामीले चाहादैमा , सोच्दैमा सफलता हात लाग्दैन । सफलता पाउन हामीले सोचे जस्तो सजिलो छैन । सफलताको बाटो सिधा नभएर बाङ्गोटिङ्गो हुन्छ । आज काम सुरु गरेर भोलि प्रतिफल मिल्दैन । एकछिन बेस्सरी दगुरेर सफलता पाईदैन ।
माथिका कतिपय लाईन पढ्दा तपाईलाइ दिक्क लाग्यो होला । अहो सफलता पाउन त सारै गारो रैछ भनेर निराश पनि हुनु भयो होला । तर सफलता पाउन निक्कै कठिन पनि छैन । हरेक कुराको आफ्नै नियम र लय हुन्छ, यदि तपाईले सफललाको लय र नियम लाई समात्न सक्नु भयो भने सफलता अबस्य मिल्छ ।
आउनुहोस जीवनमा सफलता कसरी हासिल गर्ने छलफल गरौं, सफलताका यी ब्यबहारिक टिप्सहरुलाई गहिरिएर पढ्नुहोस, खुल्ला दिमागले सोच्नुहोस र जीबनमा लागू गर्नुहोस । तपाईलाई हाम्रो अग्रिम शुभकामना तपाईको जीवन मा सफलता मिलोस ।
एक पटक बिचार गर्नुहोस त – यदि राईट दाजुभाईले आफ्नो आईडियामा बिस्वास नगरेको भए के प्लेन उड्थ्यो आज ? त्यस्तै मार्क जुगर्बर्गले आफ्नो आईडिया त्यतिकै छोडिदिए को भए नि आज उनले यो सफलता पाउने थिएनन । त्य्सैले आफ्नो आईडियामा बिस्वास गर्नुहोस र राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस ।
१. तपाईलाई मन पर्ने काम गर्नुहोस अर्थात गरेको कामलाई मन पराउनुहोस :- त्यही काम गर जुन काम गर्न तिमिलाई आनन्द लाग्छ । जब तिमी काममा आनन्द पाउछौ तब सफलता मिल्छ । जबकी तिमिलाई काम गर्न झ्याउ लाग्छ, काममा वास्तै छैन भने कसरी सफलता पाउछौ ? त्यसैले त्यही काम गर जुन कामलाई मन पराउछौ, वा जे गर्छै त्यसलाई मन पराउ ।
२. धेरै सुन्नुहोस, थोरै बोल्नुहोस :- धेरै बोल्नेले धेरै गल्ती पनि बोल्छ, त्यसैले चाहिने जति मात्र बोल्नुहोस । हामी मध्ये कतिलाई धेरै बोल्यो भने बिद्दान होइन्छ भन्ने भ्रम छ तर त्यो बिल्कुल गलत हो । जब तपाईं धेर बोल्न थाल्नु हुन्छ अनि आफैले बोलेको कुराले समस्या ल्याउछ र तपाईको सफलताको बाटो रोकिन्छ । त्यसैले धेरै सुन्ने गर्नुहोस र थोरै मात्र बोल्नुहोस।
३. खतरासँग नडराउनुहोस :- जहाँ जत्रो समस्या हुन्छ, त्यहा त्यत्रै अबसर पनि हुन्छ । जोखिम उठाउन नसक्ने मान्छेले कहिले पनि सफलता पाउन सक्दैन । फेरि यसको मतलब यो होइन कि जोखिम खोज्दै हिड्नुहोस, मतलब यो हो कि तपाईले कुनै काम गर्न चाहिराख्नु भको छ तर जोखिमको डर छ भने त्य्स्तो जोखिम देखि कहिल्यै नडराउनुहोस ।
४. आफ्नो लक्ष्यमा पूर्ण बिस्वास गर्नुहोस :- कसैकसैले नयाँ कुराको बारेमा सोच्छन तर उनिहरुलाई आफ्नो आईडियामा बिस्वास हुन्न र त्यति कै मन मनै योजना बनाउदै भत्काउदै गर्छन । यस्ता मानिसले जीवनमा कहिल्यै सफलता हासिल गर्दैनन । एक पटक बिचार गर्नुहोस त – यदि राईट दाजुभाईले आफ्नो आईडियामा बिस्वास नगरेको भए के प्लेन उड्थ्यो आज ? त्यस्तै मार्क जुगर्बर्गले आफ्नो आईडिया त्यतिकै छोडिदिए को भए नि आज उनले यो सफलता पाउने थिएनन । त्य्सैले आफ्नो आईडियामा बिस्वास गर्नुहोस र राम्रो काम गरेर देखाउनुहोस ।
५. आफ्नो रोलमोडल रोज्नुहोस :- सफलताको लागि आफ्नो एउटा आदर्श ब्यक्ती नि हुन जरुरी हुन्छ । त्यस्तो ब्यती आफुले काम गर्ने क्षेत्रको नै हुनु पर्छ । उसलाई रोल मोडल मानेर उसका राम्रा कुराहरु फलो गर्ने, सम्बन्धित बिषयमा उसग सल्लाह लिने, आफ्नो योजनाको बिषयमा छलफल गने गर्नाले तपाईलाई छिटो सफलता मिल्छ ।
६. कहिल्यै हार नमान्नुहोस :- सफलताको लागि अर्को महत्वपूर्ण टिप्स हो – जति असफलता झेले पनि जति दुख भए पनि कहिल्यै नथाक्नुहोस, कहिल्यै हार नमान्नुहोस । यहि नै हो तपाईलाई सफल बनाईछाड्ने गुण ।
७. एक्सन म्यान बन्नुहोस :- धेरै मान्छेहरुले राम्रा राम्रा कुरा गर्छन, ठुल्ठुला योजना बनाउछन तर काम भने गर्दैनन । त्यसैले उनिहरुका राम्रा र ठुला भनेका योजनाहरु त्यतिकै खेर जान्छन । त्यस कारण कुरा होइन काम गर्नुहोस । सधै एक्सन म्यान बन्नुहोस ।
८. आफले आफुलाई बिस्वास गर्नुहोस :- सफलताको महत्वपूर्ण टिप्स भनेको आफुले आफुलाई बिस्वास गर्नु पर्छ । यदि तपाईले गरिरहेको काममा तपाईलाई नै बिस्वास छैन भने अरुले बिस्वास गरिदैनन, अनि बिस्वास बिनाको काममा कसरी सफलता मिल्छ
९. सधै सकारात्मक बन्नुहोस :- धेरै मान्छेको असफलताको कारण भनेको नकारात्मक सोचाई पनि हो । त्यस्ता मान्छेहरु सानो केही भयो भने धेरै नकारात्मक भैहाल्छन र हुन लागेको काम पनि बिगार्छन । त्यसैल सधै सकारात्मक बन्नुहोस । काम गर्दाखेरी सानातिना समास्या र अप्ठ्यारा आउन सक्छन त्यसलाई सकारात्मक ग्रहन गर्नुहोस र अगाडी बढ्नुहोस ।
१०. कडा मेहनत गर्नुहोस :- काम, काम, काम । फेरि पनि काम । सफलताको लागि कामको अर्को बिकल्प नै छैन । चमत्कारले सफलता मिल्दैन । त्यसैले सफतताको लागि काम भन्दा महत्वपूर्ण अर्को छैन । तपाईले संसारमा सफलता हासिल गरेका मानिसलाई हेर्नू भयो भने उनिहरु आफ्नो क्षेत्रमा दिनको लगातार १६/१७ घन्टा १०/१५ बर्ष सम्म काम गरेको पाउनु हुन्छ । त्यसैले कामलाई रमाईलो खेल झै खेल्नुहोस र कडा मेहनत गर्नुहोस ।